Sethule iGeo-Engineering - Umagazini - iGeofumadas
Sethule iGeo-Engineering - Umagazini
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, Ubunginiyela, Innovations
Kungokweneliseka okukhulu ukuthi simemezela ukwethulwa komagazini we-Geo-engineering wezwe laseSpain. Kuzoba nezikhathi ezithile njalo ngekota, kuthuthukiswe uhlelo lwedijithali lokuqukethwe kwe-multimedia, ukulandwa kwe-pdf kanye nenguqulo ephrintiwe emicimbini emikhulu ehlanganiswe ngabalingisi bayo.
Indaba eyinhloko lolu hlobo, kabusha ubachazela eside Geo-ubunjiniyela, njengoba bohlu kuhlanganise value chain kusukela ekuthumbeni idatha kuze ekuqaleni we imodeli yebhizinisi ekuqaleni conceptualized.
Ekhasini layo eliphakathi kukhona i-infographic ekhombisa ukuvela kwamagama i-GIS, i-CAD, i-BIM okuthi emnikelweni wabo ongokomlando abagcinanga nje ngokuvuthisa ukuthambekela kokumiswa ekuphathweni kolwazi kepha bamele umucu ofanayo oholela ukwakhiwa kabusha kwezinqubo zalokho okuthiwa yi-«earth sciences», kuncane futhi kuncane okukhethekile. Ububanzi ku-infographic budlulela kulokho kuhlangana kwe-BIM + PLM kuhlaka lwenguquko yesine yezimboni manje egqugquzelwa ngama-acronyms afana namaDijithali Amawele, ama-SmartCities anokuma ngomumo okuthi esikhundleni sokubonakala kukude nakanjani kuzofika ngaphandle kokukuqaphela thina Kwenzekile ezimbonini zezitayela ze-Uber-Airbnb.
Esinye sezindatshana eziyinhloko siqoqa izitayela ku-Land Administration, phakathi kwazo lapho i-Cadastre yango-2014 yaphakamisa khona, ikhuluma ngempumelelo kanye nezinselelo ezingakahlanganiswa kulo mkhakha, onobuhle bezinto ezingokwemvelo okufanele buhlangane namamodeli wezinguquko ezibangelwa umuntu. Iphinde yethule izitayela uCadastre 2034 afisa kuzo ekusebenzeni kwakhe kumsebenzisi wokugcina ngeqhaza elibonakalayo ekuvuseleleni nasekuthuthukisweni kwedatha yendawo ekuxhumaneni kwabo namalungelo, izibopho nemikhawulo yokuhleleka komphakathi ngaphansi kwendlela yamasu wokubhalisa. hhayi ubuhlobo bendawo nje.
Ngenxa yalokho, ngalezi zihloko ezimbili eziyinhloko, amacala okusetshenziswa amahlanu afakiwe; ezintathu zigxile ekulandiseni idatha eyinhloko kanye nemiphumela emibili yokuthola iBIM ukuthuthukisa izinqubo zomkhakha.
Plex.Earth lapho Lambros ngeSpanishi eyahunyushwa Laura García sihloko isitshela okuxubile CAD-GIS izixazululo kusukela isidingo onjiniyela civil ngokombono umlando wakhe siqu:
Kwakungekho okukhethwa kukho: kwakudingeka senze kabusha umsebenzi weqiniso lezwe, elichaphazelayo cishe yonke ukufakwa. Silahlekile nxazonke izinyanga ezine, kodwa izinombolo thina kumangale: kumsebenzi wezigidi ezingu-6 ye-dollar, izindleko zokuvuselela ezingaphezu kwe $ 600.000 ...
Yilapho ngiqala khona ukuthuthukisa amathuluzi ambalwa "Okulula" ukuxhuma i-AutoCAD nge Google Earth, okwesikhashana Kwakuyinto yethu - inzuzo eyimfihlo yokuncintisana.
e-Cassini, umsunguli wayo usibonisa ngesikhathi enengxoxo Shimonti uPawulu, njengoba ekhiqiza ulwazi kusuka sendawo Hub ngenzeka njengendlela iphuzu elilodwa iqiniso.
Izakhiwo ze-LiDAR zendawo owaziwayo namuhla ikakhulukazi yi abasebenzisi, ngokuningi imvamisa kusuka iphuzu kokubukwa kwezobuchwepheshe ekugcizelelweni okuncane kakhulu kusuka ku iphuzu lokubuka kwekhwalithi, ukunemba nokunemba. Noma kunjalo Ngakho, izinselele eziningi zenzeka ngokucacile futhi ukuphelela Okuningi Chaza ngokuqondile le izikhala, okukhulu kakhulu inombolo yabasebenzisi kanye inani elifakiwe kumodeli ibhizinisi
Umongameli weChashmtech uchaza ukuthi izindlela zedijithali ezitholakala emifanekisweni ye-satellite zithola kanjani imininingwane ngokusondelene nalabo abazithola ngqo.
Ngangihlale ngifuna ukwazi ngokunemba imininingwane enikezwe i-Google. Kade bengu Amacala amabili okusetshenziswa okungenzeka engangikucabanga:
• Umklamo womqondo / wokuqala wokushaUhamba ngeziqephu.
• Ukufinyeleleka kwesimo sezulu sesitsha ukuhlaziywa kwezikhukhula zezikhukhula I-HEC-RAS 2
Isihloko esithakazelisayo sikaNicolas Mangon, ngokusemandleni okuxhunyaniswa kwe-BIM asetshenziselwa umongo we-AEC.
Uma ubonisa indlela lokhu kuhlanganiswa, esigabeni ngasinye sesakhiwo sokwakha ithuthukisa ukusebenza kahle, ukuphepha nezindleko, Ngeke neze kube umbuzo wokuthi ngabe imboni uzohamba kule ndlela, kodwa kungashesha kangakanani.
Ngaphakathi kwalolu daba, lo magazini uhlanganisa izindaba ezivela ezinkampanini ezihola embonini; I-AutoDesk, i-Bentley Systems, i-Esri, i-Topcon, i-Trimble, iKadaster, iHexagon ne-Microsoft.
Sikumema ukuba uthokozele lawa makhasi angama-60 okufundwa, ngenkathi uhlelo olulandelayo lusavunguza. Okwamanje, lo magazini unikezwa ngefomethi yedijithali, ngokusebenzisa i- ukuphrinta nokuthunyelwa ekufuneni noma ngesakhiwo sangokwenyama emlandweni lapho ama-protagonists awo ahlanganyela khona.
Thumela Previous«Langaphambilini Okuhamba phambili kwe-BIM Summit 2019
Post Next Izindaba zobuchwepheshe ku-Geo-engineering - Juni 2019Okulandelayo »